Maxkamada Ciidamada Soomaaliya oo Xukuntay Dad ku Eedeysanaa Dembiyo kala Duwan | XORRIYA NEWS
Home Wararka Maxkamada Ciidamada Soomaaliya oo Xukuntay Dad ku Eedeysanaa Dembiyo kala Duwan
Maxkamada Ciidamada Soomaaliya oo Xukuntay Dad ku Eedeysanaa Dembiyo kala Duwan
Maxkamada ciidamada qalabka sida qeybta 60 aad ayaa maanta ufariisatay xukunkii dacwad ciqaabeedka loo heystay eedeysanayaal loo heystay debiyo kala duwan sida falal la xariira argagaxisonimo, dilal loo geystay dad rayid ah iyo lunsasho hub dowladeed.
Ugu horeyn waxa maxkamada furey guddoomiyaha Maxkamada Ciidamada Qalabka sida qeybta 60 aad gaashaanle Abshir Maxamed Aadan..
Maxkamada waxa soo xaadirey Garsoorayaasha Maxkamada eedeysanayaal ilaa 10 gaaraya iyo boqolaal dadweyne oo dhageysanayey dembiyada lagu soo eedeeyey eedeysanayaasha iyo go’aanka maxkamada ka qaadatay.
Xafiiska Xeer ilaalinta maxkamada ayaa edeyn u soo jeediyey 11 ruux oo 2 kamid ah ay dumaryihiin waxana maxkamada goob joog ka ahaa 10 ka mid ah halka 1 qofna uu baxsad yahay oo laamaha amniga ay baadi goobayaan.
Waxa mid mid so’aalo maxkamada dhexdeeda loogu weydiyey eedeysanayaasha oo qaarna qirtay qaarna iska fogeeyey dambiga lagu soo eedeeyey.
8 ka mid ah eedeysanayaasha waxa lagu soo eedeeyey in ay lug kulahaayeen qarax miino dhulka lageliyey nooca telefoonada lagahego oo 16 ka bisha maarso 2020 ka dhacay maqaayad ku taalo suuqa xoolaha ee magaalada xuddur waxana ku dhaawacmay 7 askari oo ka tirsan ciidanka xooga dalka, labadakale ee eedeysane waxa looheystaa dil 2 qof oo shacab ah loogeystay 20-7-2018 oo ka dhacay deegaanka Hiibow oo hoostaga degmada xuddur.
Xeer ilaaliyaha maxkanada Maxamed Maxamuud Iidow ayaa sharaxay dambiyada lagu eedeeyey waxana maxkamada ka codsaday in shareecada islaamka lawaafijiyo xukunkooda.
“eedeysanayaasha waxay isugu jiraan kuwo ku eedeysan falala shabaabnimo, kuwo ku eedeysan dil dad shacab ah loogeystey iyo ku ku eedeysan lunsasho hub dowladeed, maxkamada sharafta leh waxan ka codsanayaa in cadaalada lamarsiyo eedeysanayaashaan ayuu yiri” Xeer ilaaliyaha Maxkamada Maxamed Maxamuud Iidow.
Abuukaataha Siid Cali Kheyraad Cismaan oo difaacayey dadkaan ku eedeysnaa falalka kaladuwan ayaa maxkamada usoo jeediyey in eedeysanayaasha ay helaan cadaalada iyo xaqa ay leeyihiin.
Gabagabadii xukunka maxkamada waxa ku dhawaaqey guddoomiyaha Maxkamada ciidamada qalabka sida qeybta 60 aad gaashaanle Abshir Maxamed Aadan.